Fizahantany, fitaterana, tontolo iainana: voatsikera ny fitantanana eto Toamasina | NewsMada
Maro ny lesoka hitan’ny praiminisitra, nandritra ny fitsidihany tany amin’ny seranan-tsambo an-dranomamy any Toamasina, ny fiandohan’ny taona teo. Tsy tena hita ny vahaolana raha ny fidinana ifotony nataon’ny minisitera sy ny APMF farany teo.
Nahazo tsikera mivaivay ny sampandraharaha maro mifandraika amin’ny minisiteran’ny Fita­te­rana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro (MTTM) eto Toamasina. To­ra­ka izany koa ny sampandraharahan’ny Tontolo iainana eto an-toerana. Nitran­gan’ iza­ny ny fivoriana notarihin’ny mi­nisitra MTTM, Randria­man­­dranto Joel, sy ny tale jeneralin’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina (APMF), Ran­drianan­tenaina Jean Edmond, ny 11 janoary teo. Fotoana niarahana amin’ny tompon’andraiki-panjakana samihafa sivily sy miaramila eto Toamasina.
Niainga avy amin’ny fitsidihana tampoka nataon’ny Praiminisitra Ntsay Chrsitian, ny 2 janoary teo, teny amin’ny fiantsonan’ny sambo an-dranomamy “port fluvial”, no nahatonga ity fivoriana ity.
Mifanipaka amin’ny zava-misy
Noresahina ny loton’ny lakandranon’i Pangalana, fe­no ahitra sy menaka maloto avy amin’ireo orinasa manamorona ny lakandrano. Tsy mirindra ny fidirana sy ny fivoahan’ny entana ao amin’ny seranan-tsambo. Misy fo­to­ana tsy ahitana ny zandary sy ny mpitandro filaminana sivily eo am-bavahady, sns.
Nambaran’ny tale jeneralin’ny APMF fa niisa 34 ny tatitra avy amin’ny sampandraharahan’ny Tontolo iainana, milaza fa mandeha ny fanadiovana ny lakandranon’i Pangalana…Mifanipaka amin’izany anefa ny zavatra hitan’ny Praiminisitra. Nokianiny koa ny loton’ny biraon’ny seranan-tsambo an-dranomamy… Tsikariny fa tsy manao ny asany ny zandary, sns.
Manoloana ireo, nilaza ny talem-paritry ny APMF Toa­ma­sina, Rakotozafiarimamy Ronsard Franck, fa efa nivory izy ireo, ny 4 janoary, taorian’ny fandalovan’ny praiminisitra, ny 2 janoary. Efa norasina ny fepetra samihafa mifandraika amin’ny zava-misy rehetra.